Kuthetha ukuthini ukuphupha ukuvuka? Fumanisa i-Intanethi ▷ ➡️ kwi-Intanethi
1 Ukuphupha ngokuvuka
2 ukuphupha ukuvuka okanye umngcwabo
3 Ukuphupha umntu omthandayo ezigqume ngesigqubuthelo
4 Iphupha lakho lokuvuka
Ukuphupha ngokuvuka akwenzi mfanekiso mhle, akunjalo? Ngokukodwa xa umntu omthandayo egutyungelwe. Sivuke sikhathazekile, sixinene kwaye sinomoya othile we-macabre. Kodwa ngaba ukutolikwa kweli phupha kuyakuqinisekisa oku kulindelwa kweendaba ezimbi ezizayo? Qhubeka nokufunda inqaku elipheleleyo kwaye ufunde ezona zinto zibalulekileyo kweli phupha.
Ukuphupha ilitye kuqhelekile kunokuba sinokucinga, kodwa ukuba ubunephupha sicinga ukuba kuya kuba kuhle ukukucela ukuba ucamngce ngeenkcukacha eziphambili zephupha lakho ngaphambi kokuba ukhangele inkcazo ngokwayo, ukuze ube nayo olona hlalutyo lubalaseleyo malunga nesiganeko osifumene.
Ngokubanzi, ukuphupha ngokuvuka kuthetha ukuba umntu osondele kakhulu unokukungcatsha ngalo naliphi na ixesha, ke yiphinda-phinda ingqalelo yakho nokhathalelo. Xa ungumntu oneliso, uhlala usazi ukuba ungubani.
ukuphupha ukuvuka okanye umngcwabo
Iphupha lokuvusa umntu ongaziwayo
Njengokuba kungakholeleki njengoko kunokubonakala kwaye kuyamangalisa, xa siphupha ngokuvuka komntu esingamaziyo, kuthetha kuphela ukuba iintsuku ezintle zisilindele, iintsuku ezifanelekileyo zokusebenza, ukonwaba nothando. Ke ukuba uloyiko alunangqondo. Yonwabele isigaba!
Ukuphupha umntu omthandayo ezigqume ngesigqubuthelo
Ukuba uvuko lolomntu omthandayo (usapho okanye umhlobo) ke kunjengokuba besesitshilo kwintshayelelo yeli nqaku, ukuba umntu osondele kakhulu kuwe uza kukungcatsha, ke kubalulekile ukuba emva kweli phupha ugcine ingqalelo yakho iphindwe kabini ukunciphisa iziphumo zale nyathelo.
Ngokufanelekileyo, kuya kufuneka ubenakho ukuphanda ngokufihlakeleyo phakathi kwabantu obathembayo ukuba kukho umntu obone intshukumo ekrokrisayo kwaye ke wenze izigqibo eziyimfuneko kwabo bayaziyo indlela yokuphelisa isenzo salomngcatshi.
Iphupha lakho lokuvuka
Ukuba uphupha owakho umngcwabo, kuyakufuneka uzame ukukhumbula ezinye zeemeko zokuvala ukutolikwa, oko kukuthi, ukuba woyike okanye wazola ngexesha lomsitho nokuba ubunazo naziphi na izityhilelo. Masiyithathe ngezahlulo:
Ukuba ubuzolile ujonge ukuvuka kwakho, luphawu lokuba uya kuba neentsuku ezizolileyo ngaphambili, izimvo zokwenza utyalomali, ukuvala izivumelwano okanye nokucwangcisa uhambo losapho.
Kodwa ukuba woyike, woyika, okanye akakwazi ukumelana noko, luphawu lokuba ubusoloko uthanda izinto eziphathekayo mvanje kwaye ufuna ukuchitha ixesha lakho kwizinto zokomoya. Kwimeko apho akuyomfuneko nokuba uye kwicawa ethile, kodwa ukufunda okungakumbi ngayo kwaye ngaphezu kwako konke, xa kunokwenzeka, wenze isisa!
Enye into ebaluleke kakhulu kolu hlobo lwamaphupha, oluhlala lusenzeka ngamaxesha athile, kukuba xa sijonga umzimba wethu ebhokisini, elinye iqumrhu liyavela kwaye lithethe nathi ngqo.
Gcina ukhumbula ukuba abanye abantu ababuboni ubukho bakho okanye loo nto, ke oku kunokuthetha ukuba umntu osele eswelekile kwaye ngoku uhlala kwindiza yomoya ufuna ukuthetha nawe. Musa ukoyika, cinga nje nzulu malunga noku kuthethwe leli qumrhu.
Sukoyika, kuba ukuphupha ngokuvuka liphupha eliqhelekileyo elinokukoyikisa. Kodwa bona amaphupha njengezinto ezintle ebomini bakho. Kuba inyani elula yokuba banokukunceda ukutolika into yanele. Akunje ngale?